१० अर्ब को एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड स्थापना – Complete Nepali News Portal
ScotNepal April 20, 2021
गैरआवासीय नेपाली संघको एनआरएनए नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड स्थापना भएको छ । विश्वभर रहेका नेपालीहरुको पूँजीलाई नेपालमा लगानी गर्ने उद्देश्यका साथ संघले फन्ड स्थापना गरिएको हो । १० अर्ब अधिकृत पूँजी राखेर दर्ता यो कम्पनीमा पाँच प्रतिशत नेपाल सरकारको पनि लगानी रहनेछ । फण्ड स्थापनाको औपचारिक घोषणा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल सरकार गैरआवासीय नेपालीसँग सहकार्यका लागि सदैव तत्पर रहेको र आवश्यक सहयोगका लागि तयार रहेको बताउनुभयो ।
यस कम्पनीको अधिकृत पूँजी. १० अर्ब रहेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको काठमाडौँस्थित सचिवालयमा यही वैशाख, ४ गते बसेको प्रथम बोर्ड बैठकले यस कोषको (फण्ड) को अध्यक्षमा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोज्यू लाई चयन गरेको जानकारी गराउँदछौँ । साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी अनलराज भट्टराईज्यूले पाउनुभएको छ । उहाँहरूको व्यवसायिक अनुभव र नेतृत्वले संसारभरका गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई उच्चतम प्रतिफल दिने कम्पनीका रुपमा यस कम्पनीलाई स्थापित गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएका छौँ । बैठकले एनआरएन. नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड लिमिटेडको विशेष साधारण सभा मिति २०७८, वैशाख २९ गते आयोजना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सो सभाबाट कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्ने एजेण्डा समेत तय गरिएको छ । यस कम्पनीमा संस्थापकको रुपमा लगानी गर्न चाहाने गैरआवासीय नेपालीहरुले सो मिति अगावै न्यूनतम ५० लाखको प्रतिवद्धतापत्र संघको सचिवालयमा पठाउन सक्नेछन् । यस फण्डका लागि सञ्चालक समिति समेत गठन गरिएको छ । सञ्चालक समितिले आफ्नो व्यवसायिक कार्य समेत अघि बढाइसकेको जानकारी गराउँदछौँ । पाँच प्रतिशत लगानीसहित सरकारसमेत प्रवद्र्धक रहेको यस कम्पनीमा ३ अर्बको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ । कम्तीमा १० अर्बको कोष बनाई नेपालको उद्यम, व्यवसाय र यातायात, पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । ८५ प्रतिशत लगानीका निम्ति गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरी छिट्टै प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन हुनेछ, जसमा दसौँ लाख नेपाली सहभागी हुने अपेक्षा छ । यसबाट संसारभर छरिएर रहेका श्रमिक, व्यवसायी, पेसाकर्मी सबैले नेपालको विकास र समृद्धिमा सकेको लगानी गरी आर्थिक लाभसमेत उठाउन पाउनुहुनेछ ।